के तपाइँलाई एसिडिटी र ग्यास्ट्रिकले सताएको छ ? यी उपायहरुले दिलाउँछ छुटकारा ! – Krazy NepaL
November 11, 2020 756
जब मनिसको पेटमा ग्यास्ट्रिक ग्रंथिमा एसिडको मात्राअधिक हुन्छ, तब एसिडिटीको समस्याले सताउ छ । एसिडिटीमा ग्यास, पेट दुखाइ र अन्य धेरै लक्षणहरू देखा पर्छन्। धेरै समय खाली पेट बास्नाले पनि एसिडिटीको समस्या हुन सक्छ । जब एसिड सामान्य भन्दा अधिक हुन्छ तब एसिड रिफ्लक्स अनुभव हुन्छ। वास्तवमा,जब हामी मसलादार खाना वा भारी खाना खान्छौं एसिडिटी हुन्छ।
कहिलेकाँही एसिडिटीको कारण धेरै असहज पनि महशुस हुन्छ। तपाईंलाई पनि एसिडिटीको समस्या छ भने चिन्ता नगर्नुस् घरेलु उपचारको सहयोगमा पनि यो समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ। तुलसी एसिडिटी हटाउनका लागि धेरै उपयोगी हुन्छ । एसिडिटी समस्याबाट बच्न धेरै घरेलु उपचारहरू छन्।
सूदिंग र कार्मिनेटिभ गुणहरू तुलसी पातहरूमा पाइन्छ जसले एसिडिटीबाट राहत प्रदान गर्दछ। यदि तपाईंलाई एसिडिटीको समस्या छ भने ३-४ तुलसी पातहरू पानीमा उमाल्नुहोस् र पिउनुहोस्, यसले तपाईंको एसिडिटी कम् गर्न मद्दत गर्छ । यो उपाय एसिडिटीका लागि सबै भन्दा उपयोगी हो ।
एसिडिटीबाट छुटकारा पाउन सौंफ पनि निकै लाभदायक हुन्छ । भिटामिन-सी, फोलेट, फाइबर जस्ता तत्व सौंफमा पाइन्छ जसले एसिडिटीको समस्या कम् गर्न निकै मद्दत गर्दछ। यो बाहेक पेटको कुनै समस्याका लागि पनि सौंफ निकै लाभदायक हुन्छ। एसिडिटीको समस्याले सताएमा सौंफको पानी पनि पिउन सकिन्छ।
दालचिनीले एसिडिटीको एक प्राकृतिक एन्ट्यासिडको काम गर्छ। यसका साथै यसले पाचन प्रणालीमा पनि निकै मद्दत गर्छ। यदि तपाईंलाई ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल पथमा संक्रमण छ भने दालचीनी मिलाएको चिया पिउन सक्नुहुन्छ,जसले यो समस्या निको बनाउन सहयोग गर्छ। दालचिनीलाई पोषक तत्वहरूको पावरहाउस पनि भनिन्छ ।
केरामा धेरै पोषक तत्व पाईन्छ जुन स्वास्थको लागि निकै लाभदायक हुन्छ। केरामा प्राकृतिक रूपमा एन्टासिड पाइन्छ जसले एसिड रिफ्लक्स रोक्न सहयोग पुर्याउँछ । यदि तपाईं घरेलु उपचारले एसिडिटी कम् गर्न चाहनुहुन्छ भने केरा सबै भन्दा राम्रो उपाय हो। हरेक बिहान एउटा केरा खानुहोस्,यसले निकै फाइदा पुर्याउँछ ।
Prevपाथिभरा माताको दर्शन गरि कार्तिक २६ गते/नोभेम्वर ११ बुधबार तपाइँको भाग्य कस्तो छ राशीफल हेर्नुस
Nextशरीरको तौल घट्ने हैन बढ्ने गर्छ राति गरिने यस्ता गल्तीहरुको कारणले
“बिहान उठ्दा कुन कुन बस्तुहरुदेखियो भने दिन अशुभ बित्छ त ? अवश्य पद्नुहोस”
डब्ल्यूएचओले भन्यो- ‘नेपाललाई आपत्कालीन सहयोग आवश्यक छ’